I-Apple kunye ne-DJI Yazisa i-Version ekhethekileyo ye-DJI Mavick Pro Drone | Ndisuka mac
I-Apple kunye ne-DJI bazisa ingxelo ekhethekileyo ye-DJI Mavick Pro drone
URuben inyongo | | iapile
Ukuba kukho inkampani enye ebhentshini kwibakala leedrone, yi-DJI. Iimodeli ezithengiswa yile nkampani ziyamangalisa ngokubhekisele kwitekhnoloji. Enye yeemodeli zayo ezaziwa kakhulu yi- U-DJI Mavick Pro, idrone encinci esongelayo elingana nayo nayiphi na ubhaka kwaye inezinto ezinomdla.
Kude kube ngoku, le drone yayithengiswa ngemibala emibini: emnyama neplatinam. Nangona kunjalo, ngentsebenziswano neApple, umbala wayo omhlophe umhlophe, bagqibe kwelokuba bayazise U-DJI Mavick Pro Alpine Mhlophe. Le modeli inokuthengwa ngevenkile yeApple nakwivenkile ye-DJI.
Unokulindela ntoni kule drone? Ewe, njengoko besesitshilo, yimodeli eneengalo ezine ezisongekayo ngokupheleleyo kwaye ingena kwisipaji okanye ubhaka. Ngokunjalo, sisixhobo onokuthi usiphathe nge-iPhone okanye i-iPad- kubandakanya i-12,9-intshi iPad Pro- okanye ngolawulo olukude olongezwa kwiphakheji yokuthengisa. Kwaye, lumka, kuba le drone ingaqhutywa kumgama ophezulu we-7 kms.
Kwelinye icala, ukuzimela kwale DJI Mavick Pro Blanoc Alpino ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-27 ngentlawulo enye. Kwaye, ngokungathi oku akonelanga, ungafezekisa ukukhawulezisa ukuya kuma-65 km / h. Malunga nokukwazi kwayo ukuthatha iifoto kunye nokurekhoda ividiyo, iMavick Pro inekhamera ekwaziyo rekhoda isisombululo se-4K ividiyo kunye nevidiyo epheleleyo ye-HD ehamba kancinci. Ikhamera inenzwa yesisombululo esinee-megapixels ezili-12.
Okokugqibela, kwi iphakheji yokuthengisa efikelela kwi-1.249 euro Iibhetri ezimbini ezifanelekileyo zibandakanyiwe; ubhaka wezothutho, izibini ezithathu zokuhambisa (i-alpine emhlophe); ulawulo olukude ngamaqhosha azinikeleyo; kunye nekhadi lememori le-16GB iMicrosoft yokugcina yonke into efakwe yikhamera ye-DJI Mavick Pro Alpine White.
Ulwazi oluthe kratya kunye nokuthenga: Apple
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » I-Apple kunye ne-DJI bazisa ingxelo ekhethekileyo ye-DJI Mavick Pro drone
Amarhe avela malunga ne-e-ink keyboard ye-Apple